बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु - dautarimedia.com
धादिङबेसी – मलेखु सडकखण्ड अन्तरगत ससाहमा धादिङबेसीतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख १२५० नं. को बसले सोहि दिशातर्फ जाँदै गरेको बा १६ प ६६८५ नं. को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार नीलकण्ठ ३ रिजालथोककी ३५ सुशीला भुजेलको मृत्यु भएको हो ।
साँघुरो सडकमा बसले ओभरटेक गर्ने क्रममा ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएकी भुजेललाई उपचारको लागि धादिङ अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । अस्पताल पुगेको केहिबेरमै उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।
बस, मोटरसाइकल र बसका चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको मोटरसाइकल चालक भने सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ। तस्विर शंकर श्रेष्ठ अन्य समाचार
पोखरा, २७ साउन (रासस)ः पोखरा प्राकृतिक सुन्दरतासँगै साहसिक पर्यटनको सहरका रुपमा पनि परिचित छ । पोखराको प्याराग्लाइडिङले साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा धेरै पर्यटकको मन जितेको छ । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पछिल्लो पटक प्याराग्लाइडिङ पनि पर्ने गरेको छ । पहिलो चरणको कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीपछि खुलेको समयमा त पोखराको प्याराग्लाइडिङ आन्तरिक पर्यटकको पनि विशेष रोजाइमा प¥यो । सायद महिनौँदेखि घरमै थुनिएर बस्नु परेका नेपालीहरु बन्दाबन्दी खकुलो भएसँगै राम्रोसँग रमाउन चाहेर पनि हुनसक्छ, पोखरा आएका धेरैले प्लाराग्लाइडिङ नै रोजेका थिए । पोखराको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन पनि यसले निकै सहयोग पु¥यायो । कम्पनीले ५० देखि ६० प्रतिशत छुटसहित दैनिक पाँच सयदेखि सात सय उडानले पोखराको आकाशलाई रङ्गीन बनाएको थियो भने आन्तरिक पर्यटक बढ्दा व्यवसायीमा पनि बन्दपछिको अवस्थामा केही आशा पलाएको थियो ।
Previous: अफगानिस्तानबाट २८८ नेपालीको उद्धार
Next: विकास नगरेको भन्दै वडाध्यक्षलाई बिजुलीको पोलमा बाँधे जनताले